Ikhaya Lamaphupho Emaphandleni - I-Airbnb
Ikhaya Lamaphupho Emaphandleni
Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo, i-Brazil
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Marilia
Indlu enhle enezindawo ezingu-800 ezakhiwe e-Santa Rita do Passa Quatro, 250km ukusuka e-São Paulo, endaweni engu-5,700щ. Itholakala endaweni ezolile, enamapulangwe futhi ayikho umgwaqo wokuphuma, itholakala emizuzwini engu-20 uma uhamba ngezinyawo ukusuka enkabeni yedolobha.
Okwesimanje, okukhangayo, okugqamile futhi okunomoya okwanele, namafasitela engilazi kuwo wonke amagumbi. Inendawo yokubhukuda enkulu enamanzi ashisayo, ingadi enezihlahla zezithelo, izihlahla ze-coconut kanye nechibi langasese elibukekayo, kanye nendlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ephelele nethokomele engadini.
Indlu inehholo lokungena elimangalisayo lapho usuvele ujabule khona ngendawo, ukunambitheka okuhle nokunakekela izinto ezikuyo.
Igumbi elikhulu lomphakathi eline-TV enkulu, i-air-conditioning kanye nokuhlobisa okuhle.
Ama-suite angu-6 anomshini wokuqandisa nokushisisa umoya, i-closet, indlu yokugezela nethala, ahlalisa abantu abangu-13 afakwe ngokunethezeka.
Igumbi lokudlela elibheke engadini nasendaweni yokubhukuda, elinetafula lezihlalo ezingu-10, umshini wokuwasha izitsha neziqinisekiso.
Indawo yokugcina ukudla nekhishi enetafula lezihlalo ezingu-6.
Igumbi elinokusondelana lokufunda noma ukuthula nje.
Ama-balcony amabili, elinye elibheke engadini nasendaweni yokubhukuda kanti elinye elibheke echibini.
Indlu yangasese enamahlaya ahlotshisiwe, itafula lamatshe neshawa yangasese.
Indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni enhle enamathele endlini ethatha abantu abengeziwe abangu-2 ngombhede olala abantu ababili, i-air-conditioning, ikhishi laseMelika, igumbi lokuphumula negumbi lokugezela.
I-barbecue emangalisayo, ewusizo futhi enesitofu, isiqandisi, i-counter, i-minibar nendlu yangasese ephelele.
Indlu inomhlaba wayo ichibi elihle langasese eliletha ubuhle nokuvumelana eduze kwemvelo.
Igalaji elimboziwe lezimoto ezintathu nendawo yokupaka ezinye ezine.
Indlu isendaweni engcono kakhulu edolobheni, emgwaqweni ozolile, ophephile, ohlotshisiwe futhi ofile, imizuzu engu-20 uhamba ngezinyawo ukusuka enkabeni yedolobha.
Indlu inama-alamu kanye nesevisi yokuvikeleka endaweni ezungeze idolobha elikhulu.
Sizoba khona ukuzithola futhi lapho zibuya endlini.
Sizenza sitholakale ngocingo nganoma yisiphi isikhathi ukubasiza babe nokuhlala okungcono kakhulu ngaphandle kokuphazamisa ubumfihlo babo.